Russia mezuru iyi egwu ya ma gbochie LinkedIn na mba | Akụkọ akụrụngwa
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ọ ghọọla ejiji maka ụfọdụ gọọmentị, ọkachasị ndị chọrọ ijikwa ozi dị na ịntanetị maka ụmụ amaala ha, dịka Russia na China, echiche bụ a na-echekwa data ụmụ amaala gị niile na sava mpaghara, iji nwee ike ịbanye n'ụzọ dị mfe karị, ọbụlagodi na ha ekwughị ya n'ụzọ ezi uche dị na ya. Afọ ole na ole gara aga, Russia mere iwu ọhụrụ iji manye ụlọ ọrụ niile na-enye ọrụ na mba ahụ ịnabata data ụmụ amaala ha niile na mba ahụ. China, n'aka nke ya, e mepụtala iwu ọhụrụ yiri nke a, iwu ga-amalite na ọnwa Juun na-esote afọ ga-emetụtakwa ụlọ ọrụ niile.
Onye nke iwu ọhụrụ a emetụtabeghị bụ LinkedIn, nke mgbe ọtụtụ iyi egwu sitere na gọọmentị Russia, ahụla ụzọ ya. Onye na-ahụ maka nkwukọrịta mgbasa ozi Russia bụ Roskomnadzor amalitela itinye iwu ọhụrụ a mgbe ụlọ ọrụ ahụ, nke dị n'aka Microsoft, enyefebeghị data niile nke ụmụ amaala ya na sava ndị akwadoro na Russia, ihe dị mkpa iji nọgide na-arụ ọrụ na mba ahụ.
LinkedIn kwadoro nkwenye nke ọrụ ahụ na nkwupụta nke anyị nwere ike ịgụ:
Ọhụụ LinkedIn bụ imepụta ohere akụ na ụba maka ndị ọrụ anyị zuru ụwa ọnụ. Anyị na-amalite ịnụ site na ndị ọrụ na Russia ndị na-ekwu na ha enweghịzi ike ịbanye na LinkedIn. Omume Roskomnadzor nke igbochi ohere ịbanye na LinkedIn na-agọnahụ ịnweta ọtụtụ nde ndị otu anyị nwere na Russia na ụlọ ọrụ ndị na-eji LinkedIn emewanye azụmaahịa ha. Anyị nwere mmasị izute nzukọ Roskomnadzor iji kpaa maka arịrịọ ị weghachite data ahụ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Russia mezuru iyi egwu ya ma gbochie LinkedIn na mba ahụ
Zaghachi Othoniel PEREZ RUIZ
The Huawei P10 hụrụ maka oge mbụ na ọtụtụ leaked oyiyi